Tareenka cusub ma waxaa dib loogu Ceshay Magacii Sannadkii 1897-kii? – Xeernews24
Tareenka cusub ma waxaa dib loogu Ceshay Magacii Sannadkii 1897-kii?
5. November 2017 /in Qormooyin/Articles /von admin
Intii u dhaxaysay sannadahii 1897-1917, dhabada Tareenka xadiidka waxaa la odhan jiray C.I.E.
(Compagnie impériale des chemins de fer éthiopiens)
oo ahaa tareen ay iska lahayd boqortooyaddi Minelik hadyad ahaana ay reer galbeedku uu siiyeen boqorka Abasiniya.
Laga Bilaabo sannadkii 1909, magaca waxaa loo badalay,C.F.E.
(Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien)
wuxuu isku badalay shirkad ay wada leeyihiin Ethiopia iyo Fransiisku
Xoriyaddi iyo dawladnimaddi Jabuuti ka dib sannadkii 1981, waxaa mar kale magacii loo badalay,C.D.E.
(Compagnie du chemin de fer djibouto-éthiopien)
oo noqday shirka ka dhaxaysa dalalka Ethiopia iyo Jabuuti ila laga soo gaadho sannadkii 2000 oo la soo af jartay 103 sanno ay soo jirtay taarrikhda Tareenku.
Wixii ka dmabeeye sannadkii 2016-ka waxaa jira tareen cusub oo casri ah oo sidda la sheego ku socon doona kooraan marar badana dib u dahac fara badan ku yimid sababo aan wali aan laga war qabin. Tareenka wuxuu u kala gooshi doona laba dal ee Jabuuti iyo Ethiopia wuxuu badalay uun tareenkii Hora.
Waxay qaar badan oo shacabka reer jabuuti ah is waydiyaan magaca rasmiga ah ee Tareenka cusub uu leeyahay muuqaalo iyo xayeesiis fara badan oo ay dawladda jabuuti u samayso tareenkan cusub marna ummadda reer jabuuti kuma arkaan wax astaan ah oo muujin in ay tareenka wax ku leeyehiin iyo in kale waxaa ay arkaan oo qudha waa Astaanta Tareen cusub ee ah (ETHIOPIAN RAYLWAYS) oo ah tareenka Ethiopia una muuqda magaci 1897.kii oo laga reebay uun boqortooyadda reer Abasinia
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/11/Djb-Rail-ways.jpg 183 275 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-11-05 18:44:342017-11-05 18:44:34Tareenka cusub ma waxaa dib loogu Ceshay Magacii Sannadkii 1897-kii?
Mahad Mahamud seeks asylum in Iceland? Mustaqbalka Gobolada Waqooyi ee Soomaaliya “Hargeisa ma Noqon kartaa Caasimada...